How'd it happen and more reports?: ကြက်သားမှုန့်က အချိုမှုန့်ထက်ပင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဟု စားသုံးသူ ကြိုတင် ကာကွယ်ရေးအသင်းပြော..
ကြက်သားမှုန့်က အချိုမှုန့်ထက်ပင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဟု စားသုံးသူ ကြိုတင် ကာကွယ်ရေးအသင်းပြော..
ကြက်သားမှုန့် - Chicken Seasoning Powder
ဟိုတစ်နေ့ ကြက်သားမှုန့် အကြောင်း ထုတ်ပြန်စာတစ်ခုကို ဖတ်မိ လိုက်ရာကို အခြေခံပြီး စာဖတ်သူများကို ကျွန်မရဲ့အမြင်လေးကို တင်ပြချင်တာနဲ့ ဒီစာကို ရေးရတာပါ။ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ အတွက် အကြံပြုစာဆို ရင်လဲမှန်ပါတယ်ရှင်။
ကြက်သားမှုန့် ကိစ္စကို အစားအသောက်စီမံကွပ်ကဲမှု (Food Management) ရှုထောင့် ကနေကြည့်ပြီး အောက်ပါအတိုင်း ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်း သင့်တယ်လို့ ကျွန်မ ကတော့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
၃- နောက်တစ်ခု ကတော့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကို ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ တကွ အညွှန်းပေါ်မှာ ဖော်ပြခိုင်းတာပါ။ အထူးသဖြင့် ကြက်သားမှုန့် 
လို့ခေါ်ရင် ကြက်သားမှုန့် တကယ် ဘယ်လောက် ပါသလဲ ဆိုတာကို အညွှန်းပေါ်မှာ ရေးခိုင်းတာပါ။ ဒီနည်းကို လုပ်ခြင်းဖြင့် စားသုံးသူတွေ အနေနဲ့ အညွှန်းကို ဖတ်ပြီး ဘယ်တံဆိပ် ကတော့ ကြက်သားမှုန့် ဘယ်လောက် ပိုပါတယ် စသည်ဖြင့် ချင့်ချိန်ဝယ်ယူနိုင် မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကြက်သားမှုန့်များသည် နာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့လာသည်။ Chicken flavored broth powder, Chicken Broth စတာတွေရှိတယ်။ အရောင်းကုမ္ပဏီတွေကတော့ စီးပွါးရေးသဘောအရ အကောင်းချည်းရေးထားပါတယ်။ ကျန်းမာရေးဘက်ကနေ အပြစ်ရှာကြည့်သင့်ပါတယ်။
ကြက်သားမှုန့်မှာ No MSG, 100% Natural လို့ဆိုထားပါတယ်။ ထောက်ပြတာတခုကတော့ Chicken Broth: No MSG Labels Are False ကြက်သားမှုန့် - ဟင်ချိုမှုန့်မပါဆိုတာ မှားပါတယ်တဲ့။ ကြက်သားမှုန့်က ပိုကောင်းတယ်။ ဟင်းချိုမှုန့်မပါ ဆိုတဲ့သဘောက ဟင်းချိုမှုန့်မကောင်းတာကို စီးပွါးရေးသမား အချင်ချင်း (ဘူဘူချင်း) ကျောတဲ့သဘောဖြစ်နေပါတယ်။
ဟင်းချိုမှုန့်ထဲမှာပါတဲ့ MSG ဆိုတာ Neurotoxin အာရုံကြောအဆိပ်ဖြစ်တယ်လို့ ကြက်သားမှုန့် ဆန့်ကျင်ရေးသမားက ဆိုပါတယ်။ ဦးနှောက်ထဲမှာရှိတဲ့ (ဟိုက်ပိုသဲလမတ်စ်) မှာရှိတဲ့ (နူရုမ်း) တွေကို ပျက်စီး စေတယ်လို့ ထောက်ပြထားတာ ဖတ်ရပါတယ်။ MSG ကို ကြွက်တွေကိုကြွေးတော ဝလာတယ်၊ လူတွေမှာ ခေါင်းကိုက်တာနဲ့ (မိုက်ဂရင်း) ဖြစ်စေတယ်။
Yeast Extract တဆေးကထုတ်လုပ်သည်လို့လဲ ကြော်ညာပါသေးတယ်။ အမှန်က တဆေးဆိုတာ မုန့်ဖုတ်ရာ မှာသာ ကောင်းတာပါ။ အိမ်မှာတင် ကြက်သားကို အဲလိုလုပ်ရင် တဆေးသွားမထည့်ပါလေနဲ့။ လူရီစရာ ဖြစ်ပါမယ်။
Organic Spices လို့လဲကြော်ညာပြန်ပါသေးတယ်။ ထုတ်လုပ်သူတွေက Spice mix ထဲမှာ MSG 50% ထက် နည်းပါရင် မပါဘူးလို့ရေးနိုင်တယ်။
ချုပ်ပြောရရင် ကြက်သားမှုန့်ဆိုတာလဲ ဟင်းချိုမှုန့်သာဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်း-အဆိုး ဆတူလောက်ရှိပါမယ်။ သုတေသန နည်းပါသေးတယ်။ Ajinomoto ဟင်းချိုမှုန့်ကို ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
ကြက်သားမှုန့်က အချိုမှုန့်ထက်ပင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဟု စားသုံးသူ ကြိုတင် ကာကွယ်ရေးအသင်းပြော
Organic Spices လို့လဲကြော်ညာပြန်ပါသေးတယ်။ ထုတ်လုပ်သူတွေက Spice mix ထဲမှာ MSG 50% ထက်နည်းပါရင် မပါဘူးလို့ရေးနိုင်တယ်။ ချုပ်ပြောရရင် ကြက်သားမှုန့်ဆိုတာလဲ ဟင်းချိုမှုန့်သာဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်း-အဆိုး ဆတူလောက်ရှိပါမယ်။ သုတေသန နည်းပါသေးတယ်။ သွေးတိုး၊ ဆီးချိုရှိသူတွေနဲ့ မသင့်ပါ။
Dashi ဒက်ရှီဂျပန်စာဆိုတာ Soup စွပ်ပြုပ်လုပ်ရာမှာနဲ့ ခေါက်ဆွဲစတာတွေကို ချက်ပြုပ်ရာမှာ သုံးတယ်။ Kelp ခေါ်တဲ့ အညိုရောင် ပင်လယ်ရေညှိကနေ ထုတ်လုပ်တယ်။ Niboshi ခေါ်တဲ့ဆာဒင်းငါးပေါက်စနဲ့ Shiitake ခေါ်မှိုတမျိုးကိုလည်း သုံးတယ်။ ၁၉ဝ၈ ကတည်းက ပေါ်တယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက် လေ့လာထားတာ မတွေ့သေးပါ။
MONOSODIUM GLUTAMATE (MSG): Maggi, Knorr, Royco infact it is in all the seasoning cubes
I have been very particular about the type of seasoning my wife uses and this led me toastudy on Monosodium Glutomate (you remember Vedan and Ajinomoto?) and its effect on the body. It was all in the news some years ago in Nigeria that we needed to avoid Vedan and Ajinomoto because the seasoning is made with Monosodium Glutomate (MSG). White maggi!
What I discovered lately is that MSG is part of the ingredient used to make all the seasoning cubes in the market in Nigeria from Maggi, Knorr, Royco etc. Even the Noodles makers in Nigeria use it in their seasoning. I even checked some products made “by Supreme Spice” and discovered MSG as one of their ingredients.
Monosodium glutamate (MSG) isaflavor enhancer added to thousands of foods you and your family regularly eat. It's also one of the worst food additives on the market. The more you use MSG flavor enhancer in your food, the more you are likely to experience its side effects.MSG is an excitotoxin, which means it overexcites your cells to the point of damage or death, causing brain damage to varying degrees, and potentially even triggering or worsening learning disabilities.Some of the Monosodium Glutamate side effects on body include:
Children are more vulnerable to MSG dangers than adults. In fact, MSG and other flavor enhancers are not permitted in foods produced specifically for infants and young children who are 12 months old or less.
OSES IS TALKING says let us return to our roots. Makeadecision to avoid MSG in your diet as much as possible. Prepare food at home, using fresh, locally grown ingredients like “Iru or dawadawa”.(African locust beans).
ဟင်းချိုမှုန့်မှာ အဓိကပါတဲ့ Glutamic acid (ဂလူတားမစ် အက်စစ်) ကို ၁၈၆၆ ကတည်းက ဂျာမန်ပညာရှင် တွေ့ထားတယ်။ ၁၉ဝ၈ မှာ Kikunae Ikeda (အိုင်ကီးဒါး) ဂျပန် ဘုရင့်တက္ကသိုလ်ကနေ အရာသာဓါတုပစ္စည်းအဖြစ် ဖေါ်ထုတ်ပါတယ်။ Laminaria japonica ပင်လယ် ရေမှော်ပင်ကနေ ထုတ်ယူတာပါ။ Katsuobushi နဲ့ Kombu အရသာမှုန့်တွေကိုလည်း (အိုက်ကီဒါး) ကနေ တွေ့တာပါ။ Dashi လို့ခေါ်တယ်။ အရသာသစ်ဟာ ချိုတာလည်း မဟုတ်၊ ငန်တာလည်း မဟုတ်၊ ချဉ်တာလည်း မဟုတ်၊ ခါးတာလည်း မဟုတ်ပါ။ လူတွေက ကြိုက်ကြတယ်။
ဟင်းချိုမှုန့်သုံးစွဲနေခဲ့ကြတာ နှစ်ပေါင်း ၁ဝဝ ကျော်ပါပြီ။ သုတေသနတွေလည်းလုပ်ကြတာများပါပြီ။ အခုထိတော့ မသုံးစွဲသင့်၊ သုံးလည်းဘာမှမဖြစ် အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ စွဲစေတာတော့ မှန်တယ်။ မသုံးရမနေနိုင်သူတွေ၊ အဲတာမပါ ဟင်းမချက်တတ်သူတွေ ရှိတယ်။ အဲတာမပါပဲ ချက်တတ်၊ စားတတ်သူတွေလည်းရှိတယ်။
ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ လူကြီးမင်းတို့နဲ့ ဂုဏ်သရေရှိအမျိုးသမီးတို့ သဘောပါခင်ဗျား။ ကျွန်တေ်ာ့အိမ်မှာတော့ ဧည့်သည်လာလို့ စားချင်သူဆိုရင် ပေးဘို့သာ ဝယ်ထားပါတယ်။